Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard (DSD) သည် SEO အေဂျင်စီများအတွက်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံး All-In-One ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သနည်း။
SEO မုန်တိုင်းအတွင်းအစတွင်၊ သော့ချက်စာလုံးများတည်နေရာသည်အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဆိုက်ပိုင်ရှင်များသည် ၀ က်ဘ်စီမံခန့်ခွဲသူမရှိသေးသောအခါဤအတိုင်းအတာကိုအဓိကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ရလဒ်များကိုလမ်းညွှန်ရန်ခြေရာခံကိရိယာများနီးပါးကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရလျှင် SEO များသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အောင်မြင်မှုအတွက်အညွှန်းကိန်းမဟုတ်ကြောင်းလျင်မြန်စွာသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးအတွက်ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေခြင်းဟာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့်ထိုသော့ချက်စာလုံးအတွက်ထုတ်လွှတ်သောလမ်းကြောင်းသည်အနိမ့်ကျနေပြီးပြောင်းလဲမှုများမှာလည်းနည်းနေပါသေးသည်။
အချက်အလက်များစွာသည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်မည်သို့ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဥပမာ - ဝက်ဘ်ဆိုက်တင်နှုန်း၊ လုံခြုံရေး၊ ဒိုမိန်းခွင့်ပြုချက်၊ metadata၊ bounce rate နှင့် backlinks ။ SEO ဆိုသည်မှာလုပ်ရန်စာရင်းရှိအမှတ်အသားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင်၏အရေးကြီးဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုသေချာစေရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပြိုင်ဘက်များအားသော့ချက်စာလုံးများအတွက်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤအသိအမြင်သည် SEO များအားအခြားမက်ထရစ်များနှင့်ခြေရာခံရန်ပေါင်းစပ်ရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ဥပမာ - အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအသွားအလာနှင့်ပြောင်းလဲမှုများ။
ဒီတော့ဒါတွေအားလုံးကိုမှန်အောင်လုပ်ဖို့၊ မင်းမှာထိရောက်တဲ့ tools တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။ သို့သော်ထိုအရာအားလုံးကိုဆိုဒ်များအတွက်အသုံးပြုရန်ပင်ပန်းသည်။ All-in-one tool တစ်ခုလိုလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ SEO ကျွမ်းကျင်သူများက Semalt သင်၏ဒိုမိန်းပေါ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သုည - Dedicated SEO Dashboard (DSD) ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့် 'ပြီးပြည့်စုံသော web analytics နှင့် SEO စာရင်းစစ်' 'ပလက်ဖောင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အောက်ရှိသင့်ဖောက်သည်များအားအဆင့်မြင့်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ဤအခြေခံလမ်းညွှန်သည်သင့်အတွက်အလွန်ထိရောက်သော SEO tool ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှင်းပြထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအထူးဖြစ်စေသည့်အချက်အချို့။
အဘယ်ကြောင့်ဒီ DSD ကိုးကားစရာ tool ကိုသုံးပါ?
DSD SEO ကိရိယာသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်သောသော့ချက်ကျသောသော့ချက်ကျသောသုတေသနနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှခက်ခဲစေသည်။ ဤကိရိယာဖြင့်သင်ဘာအလုပ်လုပ်သည်၊ သင်၏နည်းဗျူဟာ၏မည်သည့်အပိုင်းများကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤအကောင်းဆုံး DSD SEO tool သည်သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများကိုလည်းပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်တိုင်းပြည်၊ ဒေသသို့မဟုတ်ဘာသာစကားအရရှာဖွေမှုစွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုစီမံခန့်ခွဲလျှင်၊ အထူးပြုလုပ်ထားသော SEO dashboard သည်သင်ပျံသန်းနေသော site တစ်ခုစီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသောလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်များစွာသောအချက်အလက်များကိုစာရင်းဇယားများထဲသို့ထည့်ပြီးကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလျင်အမြန်လွှမ်းမိုးသွားပြီးအစီရင်ခံစာများသည်တိကျမှုမရှိနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်အလုပ်ချိန်ကိုချွေတာရန်နှင့်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်တိကျသောအစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်သီးခြား SEO dashboard ကိုသုံးနိုင်သည်။
Dedicated SEO dashboard သည်အကြံပြုထားသောအွန်လိုင်း SEO tool များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ SEO ကျွမ်းကျင်သူများသည် DSD ၏စာရင်းစစ်ဆေးမှုစွမ်းရည်ကိုဘယ်သောအခါမျှမရရှိနိုင်ပါ အကောင်းဆုံး SEO ဆန်းစစ်ခြင်းကိရိယာ။
သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့်အပိုင်းများကိုတိုးတက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဤကိရိယာကပြသသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဆန်းစစ်မှုအရသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အစမှတ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ပြိုင်ဘက်နောက်ကျောများကိုဖော်ထုတ်ရန် DSD ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိကျိုးပဲ့နေသောလင့်ခ်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်နှင့်သင်၏ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစာမျက်နှာများကိုလျှပ်တစ်ပြက်ကြည့်ရှုရန်ဤ DSD SEO tool ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့သည်သင်၏အဆင့်ကိုအလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်ခြင်း၊ အသစ်အဆင့်အခွင့်အလမ်းများ။ ဤ SEO tool ၏လူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ site ကိုအပြိုင်အဆိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်လွယ်ကူစေသည်၊
အထူးပြု SEO ဆိုသည်မှာ dashboard ကို SEO keyword tool တစ်ခုအနေနှင့်
SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အောင်မြင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သော web analytics နှင့်စာရင်းစစ်ကိရိယာများအားလုံးကို၎င်းသည်ပေးသည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသော SEO dashboard ဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များသည်အရေးပါသောမက်ထရစ်အားလုံးကိုအလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်ပြီးလက်ရှိ optimization အမှားများကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ သင်၏ site သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများထံမှအခမဲ့အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော SEO dashboard သည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး SEO စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မရေမတွက်နိုင်သောအသုံးဝင်သောစွမ်းဆောင်ချက်များရှိပြီးသင့်အားလူကြိုက်အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏သန်းချီသောအဆင့်ကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည် SEO သော့ချက်စာလုံးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံးသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေရန်၊ ဆိုက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုခြေရာခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ SEO ဆိုသည်မှာ dashboard: အဘယ်အရာပါဝင်သည်?
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူး SEO dashboard တွင်ပါဝင်သောအင်္ဂါရပ်များမှာ -
ဤကဏ္ section သည် Google ၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သောသော့ချက်စာလုံးများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများနှင့်သီးသန့်သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုအတွက်သူတို့၏ SERP ရာထူးများကိုဖော်ပြထားသည်။
အမှန်မှာမှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် SEO နှင့် SEM လှုပ်ရှားမှုများ၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဂူးဂဲလ်တွင်ပိုမိုမြင်သာမြင်သာမှုရှိ၊
မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရွေးချယ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဖြင့်စတင်သင့်သည်။ သင် DSD နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သင့်သည်၊ နောက်ဆုံးပေါ် Semalt ထုတ်ကုန် အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များကိုအထူးဂရုပြု ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အမြင့်ဆုံးနေရာများသို့ရောက်ရှိရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်ကို DSD ဖြင့်သင်သိလိမ့်မည်။
သင်၏အရင်းအမြစ်နှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြည့်စုံစွာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းကသင်သည်ထိပ်ဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ်များရရှိရန်နှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များသည် SERP ၏ဆက်စပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးဝင်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုချဲ့ထွင်ရန်ပိုခက်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာသုတေသနသည်ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သည့်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ဂူဂဲလ် TOP 100 တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ဆင်တူသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤကိရိယာသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မိုဘိုင်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာရှိနေမှု၊ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ SEO နှင့်အခြားအရေးပါသောအချက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
ပုံတူပွားခြင်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။ ဂူးဂဲလ်သည်သုံးစွဲသူများအားတန်ဖိုးရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုပြသချင်သည်။ ဂူဂဲလ်အား၎င်းသည်မမှန်မကန်အကြောင်းအရာများကိုပြသခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အသုံးပြုသူများကသူတို့လိုချင်သောအကြောင်းအရာများကိုရလိုသည် - သက်ဆိုင်ရမည်၊ တန်ဖိုးမြှင့ ်၍ ၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရလိမ့်မည်။
ဒါ tool ကို သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာကို plagiarized မဟုတ်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဂူဂဲလ်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားမလားစဉ်းစားသည်။
Google ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏တည်နေရာကိုလွှမ်းမိုးသောအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလျှင်မြန်လျှင်မြန်အောင်မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။ ဒီအတွက်ငါဘယ်ကိရိယာတွေကိုသုံးသင့်သလဲ။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖွင့်ချိန်သည် Google လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို DSD မှဆုံးဖြတ်သည်။
အမှန်မှာ၊ စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းသည် Google ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာတင်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ပိုကောင်းသောရာထူးများရရှိထားသော်လည်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်စေသည် အသုံးပြုသူ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည် - အကယ်၍ စာမျက်နှာနှင့်ပထမဆုံးထိတွေ့မိလျှင်၎င်းသည်အေးခဲစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြည်းဖြည်းသည်တက်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကွာအဝေးနှင့်ချဉ်းကပ်သည်။ အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းစတိုးများတွင်အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာဖောက်သည်များသည်အခမဲ့စတိုးဆိုင်များတွင်မ ၀ ယ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်စဉ်စတိုးဆိုင်ပျက်သွားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အမြန်နှုန်းသည်လည်းတွန်းအားဟုခေါ်သည့်နှုန်းအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် subpage တစ်ခုတည်းထဲသို့ ၀ င်ပြီးနောက်ထွက်ခွာသွားသောလူအရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ပေးသော parameter တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှေးနေလျှင်၊ များစွာသောသူတို့သည်အကြောင်းအရာဖွင့်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲပိတ်ကြသည်။
သင်၏ SEO ဝက်ဘ်ဆိုက်အားအထူးပြုလုပ်ထားသော SEO dashboard ဝက်ဘ်သရုပ်ခွဲကိရိယာဖြင့်လေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအခမဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အားနည်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်နှင့်များစွာသောအသွားအလာရရန်အတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်သည်။ ကျိုးပဲ့နေတဲ့လင့်ခ်များကိုပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ DSD ကိရိယာဖြင့်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖြင့်၊ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ရသည့်ပြproblemsနာများကိုအလျင်အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
တစ်နည်းပြောရရင်သင့် site ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။ သို့သော်၊ တိုးတက်အောင်မပြုလုပ်နိုင်သောလုံးဝပြီးပြည့်စုံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုမရှိပါ။ ဤ SEO ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာသည်ဤရှုထောင့်များကို URL မှပင်သင်သိရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ သင့် site ၏အဆင့်ကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုသင်လေ့လာရသည်။ ထို့အပြင်၊ သင့် site ကိုညွှန်ပြနေသော backlink များ၏နံပါတ်နှင့်အရေးကြီးပုံကိုသိရှိရန်ဒီ tool ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သင်သည် site analysis တစ်ခုကိုပြုလုပ်သောအခါသင်သည်ကွဲပြားသော URLs များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသင်၏ပြိုင်ဘက်များကသင့်ထက်အဘယ်ကြောင့်အဆင့်မြင့်သည်ဟုထင်ရသည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူး SEO ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသင်၏ SEO အားအချိန်တိုင်းထိပ်တန်းအဆင့်သို့ရောက်အောင်ကူညီပေးသည်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုက်ဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့သင်ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်သိသည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအင်တာနက်ပေါ်က ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးသင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်က URL စစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ များစွာသောဘလော့ဂါများ၊ SEO အေဂျင်စီများ၊ SEO အလွတ်များ၊ Semalt ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများစွာသည်ဤကိရိယာကိုသဘောကျကြသည်။